Nhau - Cardigan Sangano Kurongwa.
Iyo inozivikanwawo seweft-chikamu chikamu, rimwe-rakatsigira sangano. Kuruka tsono kurongeka: kuruka juzi ine yakazara tsono pane imwechete tsono mubhedha. Mucheka une hukuru hwakakura uye hwakapetana, uye zviri nyore kudonha mushure mekunge chiuno chaputswa.
Iyo inozivikanwawo sembabvu machira, ndeyechikamu chimwe chete se1 + 1 mbabvu uye 2 + 2 mbabvu. Kuruka kunoitwa pamubhedha wetsono wakapetwa, mativi matatu anopinda mubasa, uye kudzika kwechiuno kwakafanana. Kuruka kuruka: kumberi neshure mibhedha yetsono yakarongedzwa nematanho akazara.
-1 + 1 mbabvu yakarukwa
Iyo inozivikanwawo sembabvu imwechete. Nyorera kune neckline, cuffs uye hem.
-2 + 2 mbabvu yakarukwa
Iine dhigirii yepamusoro yekuwedzera kwekuwedzera uye kusimba, hafu yekuwedzeredza yakapetwa kaviri kukura kweiyo yemicheka yakarukwa.
-Kubvisa Idling Sangano
Iyo inozivikanwawo seyakaderedzwa mweya wedenga dhizaini, iyo inoumbwa nemhando yeiyo ribbed chimiro uye yakati sandara tsono mamiriro. Maitiro: Iwo masitetetete akapamhamha kumberi nekumashure mativi haana kubatana, mune yepamusoro nyika, mukobvu kupfuura mbabvu turu, iine kudziya kwakanaka, kuderera kwekupedzisira, uye chimiro chakatsiga.
-Tuck Circle Sangano
Yakasungwa machira ane imwechete tsono mubhedha pamusoro, inozivikanwawo seyakapetwa tsono mafuta maruva. Iyo tuck inogona kuumba akasiyana maitiro mhedzisiro senge mesh mapatani, asina kuenzana mapatani, uye ane mavara mapatani. Nekuda kwekuvapo kwezvishongo zvakareba, simba rejira rinokanganiswa uye zviri nyore kuwedzera padhuze.
-Fat Ruva Sangano
Mafuta Ruva Sangano izita rakajairika reJihua Sangano. Zvinoenderana nekuwedzererwa kwakaumbwa netuck, iyo yepamusoro inoumba iyo convex pateni, nezvimwewo Kune imwechete-mativi tuck uye maviri-mativi tuck; kune imwechete-mutsara tuck uye yakawanda-mitsara tuck; kune imwechete-tsono tuck uye yakawanda-tsono tuck.
Zita resainzi rechimiro chakamonyoroka chinonzi chimiro chemakorani. Nekufambisa mubhedha wetsono, iwo masisitimu akavezwa-akarukwa pamubhedha wetsono wakapetwa.
-Kapetwa kaviri hove masikisi
Kaviri hove chiyero munyama inonziwo isiri-yekuruka nyama, uye inonziwo kaviri yuanbao tsono. Yakarukwa pamubhedha wetsono wakapetwa, uye musimboti wayo wakaita mativi maviri. Zvimiro: Iyo jira rehove mbiri chiyero chiri nyore kukwidziridzwa uye kuumbika munzira ino tenderera, iyo inoderedza chimiro chekuchengetedza zvipfeko, asi iko kudziya kwekudziya kunowedzerwa, uye jira rine rakakora uye rakakora kunzwa. Vakawanda kushandiswa tsono knitting.
Iyo jacquard kuruka imhando yeshinda inosarudza shinda mukosi uye inogadzira zvishwe pane imwe nguva zvichienderana nezvinodiwa pateni. Kana shinda ikasasungwa, inowanzo tenderera kumashure kwejira uye inogona kurukwa pamubhedha mumwe chete wesono. . Zvimiro: Mucheka uyu uri mukobvu, hausi nyore kuumbika, kuwedzereka kwakabatana pamwe nekusawanika zvakanyanya, uye ine yakanaka mhedzisiro.
-Rinoratidzira maruva akarongeka
Iro zita resainzi reiyo isina maruva dhizaini iri leno dhizaini, inozivikanwawo sepichisi ruva dhizaini, iyo inogona kurukwa pane imwechete tsono mubhedha. Dzakarukwa tsono dzakarongedzwa zvizere, iine imwechete juzi seyakakosha dhizaini, uye iyo misono inochinjiswa zvinoenderana neiyo pateni. Inoshandiswa zvakanyanya mumabhawa ekumisikidza mapatani.